Norway oo Somalia ka bixineysa Deyn dhan 353 Milyan oo Doolar [Deyn lagu gudayo Deyn kale] | Xaysimo
Home War Norway oo Somalia ka bixineysa Deyn dhan 353 Milyan oo Doolar
Norway oo Somalia ka bixineysa Deyn dhan 353 Milyan oo Doolar [Deyn lagu gudayo Deyn kale]
Norway ayaa sheegtay in deyntan ay ku caawineyso Soomaaliya, si ay isaga bixiso deynta looga leeyahay sanduuqa horumarinta Bankiga Aduunka ee loo yaqaan IDA. Taas oo Soomaaliya u sahli doonto in dib loogu furo Akoonkii (xisaabtii) ay ku laheyd sanduuqa horumarinta bankiga aduunka, looguna ogolaado soo qaadashada deyn cusub oo maalgalin la xiriirta.
Sadex meelood meel kamid ah(1/3) deynta Soomaaliya lagu leeyahay, ayaa waxaa iska leh hey’addaha maaliyadeed ee aduunka, gaar ahaan Bankiyada horumarinta dalalka, hey’adda lacagta (IMF) iyo Bankiga Aduunka. Si Soomaaliya ay ugu suurtagasho barnaamijka deyn cafinta, waxaa waajib ahayd in marka hore la bixiyo lacagaha deymaha ah ee Soomaaliya ay ku leeyihiin hey’addahaas.
Norway ayaa maanta sheegtay inay Soomaaliya ku caawineyso bixinta deynta looga leeyahay Sanduuqa horumarinta ee Bankiga Aduunka, sidoo kale waxey Norway sheegtay in dowlada UK ayaa ayadna dhankeeda bixin doonta deynta Soomaaliya looga leeyahay Bankiga horumarinta Afrika. Waxaana dhiman oo kali ah wadan sadexaad oo bixiya ama damaanaq qaada deynta Soomaaliya looga leeyahay hey’adda lacagta aduunka ee IMF.
Halkan ka akhriso qoraalkii